Urur WADDANI Ah oo Ku Baaqay In La Sameeyo Sharci Lagu Xakameynayo Muwaadiniinta Hagar-daameeya Qaranka | Gabiley News Online
Hargeisa (Hargeisa Press)- Ururka la baxay xoojinta Qaranimada Somaliland oo loo soo gaabiyo (UXQ), ayaa soo jeediyey in sharci laga soo saaro muwaadiniinta caadeystay hagar-daamaynta Qaranka, isla markaana laga qaado talaabo.
Ururkan oo ay aqoonyahan reer Somaliland ku aasaaseen dalka sanadka 2020, isla markaana ah dhaqdhaqaaq Waddani ah, ayaa war-murtiyeed uu soo saaray oo ay ku saxeexan yihiin Guddoomiyaha iyo Afhayeenka Ururkaasi, waxa ay kaga digeen dhaqanada lidiga ku ah Jamhuuriyada Somaliland ee siyaabaha kala duwan loogu maleegayo suuldaaraynta jiritaanka iyo horumarka dalka.
Baaqa Ururka UXQ oo sumadiisu ahayd 2020/316/JSL, soona saareen 22 bishan March, ayaa u dhignaa sidan:-
IYADOO UU WAAYQ-ARAG U YAHAY Diyaarintii, dhamaystirkii iyo u codayntii Dastuurka JSL iyo guusha gooni isutaaga;
IYADOO UU WAAYO-ARAG U YAHAY, cidhib-xumada iyo dhibaatada xukunka ku dhisan talo-maroorsiga iyo keli-talisnimada ee dalku ku soo jiray muddo 30 sannadooda ah oo uu Soomaaliya kamid ahaa, kana feejigan dib-u-soo noqoshada xukun noocaas ah iyo midnimo dal kale oo lumisa gobanimada qarankan;
Wuxu UXQS si adag u difaacayaa Jiritaanka Jamhuuriyada Somaliland, waxaanu Baaq midaysan u dirayaa, cod dheerna Ku gaadhsiinayaa Ummada iska leh Jamhuuriyada Somaliland sida ku qeexan xuduuda qaran ee Dhulled, Badeed iyo hawaba in meel looga soo wada jeesto fikrad kasta oo furaysa baaba’a qarankan, iyadoo si mida dhamaaan looga hartagayo isku-day kasta mid qof, qabiil iyo qarran kale oo hadimeynaya qarrankan. Ha ahaato fikrad , cod, iyo gacan intaba.